Ihe ngosi ntanetị n'efu - Ntụziaka dị elu
O nwere ike ịbụ na ị hụlarị ọtụtụ ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji wepụ ihe osise na web ma otu n'ime ihe kachasị mfe iji mee maka nzube a bụ Saveallimages. Ihe kacha mkpa mere i ji jiri ngwá ọrụ a mee ihe bụ na ọ dịghị achọ ọrụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ bụ kpamkpam n'efu!
Ụzọ ọ na-arụ ọrụ:
Ikwesighi ịpị ihe oyiyi otu mgbe nke ọzọ n'ihi na ọ bụ ụzọ mgbapụ oge na oge. Naanị ị ga-abanye URL ma ọ bụ jikọta na ebe nrụọrụ weebụ nke ihe ịchọrọ ịchọta na template nyere. Mgbe ahụ, pịa ọ bụla nke bọtịnụ e nyere n'okpuru ebe a - small business camera. Ngwaọrụ na-echekwa ihe oyiyi niile achọrọ na faịlụ zip.
E nwere igbe anọ dị n'okpuru ma ha bụ maka ụdị iche iche iche iche. Naanị ị chọrọ ka ịhọrọ nhọrọ kachasị amasị gị. Mkpọchi ndị ahụ bụ maka ihe eji echekwa ihe oyiyi, nke zuru ezu, ihe nkwụsịtụ, na ụdị àgwà nzọpụta dị egwu.
Nkịtị: Ọnọdụ a na-echekwa ihe oyiyi niile dị na ibe a.
Kpamkpam: A na-eji ọnọdụ a maka ichekwa ihe oyiyi site na vidiyo na ibe dị ugbu a.
Nkọwapụ: Ọnọdụ a bụ maka ichekwa ihe oyiyi na ibe weebụ nke nwere nsogbu. Otú ọ dị, ị ga-aghọta na ọnọdụ a na-ewe oge dị ogologo iji gbaa ọsọ.
Na-eme ihe ike: Ọnọdụ a na-azọpụta ọtụtụ foto dị ka o kwere mee na ibe a na ibe ndị metụtara ya.
Iji jiri ngwá ọrụ a n'efu, ị ga-edebanye aha na saveallimages.com..E nwere ụdị mmadụ abụọ. Ị nwere ike ịghọ onye nweere onwe ya ma ọ bụ onye nke kachasị elu. N'ezie, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghọ onye nweere onwe gị iji nwalee ngwá ọrụ ahụ tupu ịkwalite ndị òtù gị.
Dị ka onye nweere onwe ya, ị nwere ike iwepụdị eserese 25 site na arịrịọ. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-echekwa ihe oyiyi ahụ na oke njirimara. Nke abuo, a ga-azoputa ihe oyiyi ahu na ihe omimi na mgbasa ozi.
N'aka nke ọzọ, dị ka onye kachasị elu, ị nwere ike ibelata ihe oyiyi 1500 site na arịrịọ. Ihe oyiyi ahụ agaghị enwe atụmatụ mmiri na enweghị mgbasa ozi. Tụkwasị na nke a, naanị ndị na-eto eto kachasị elu nwere ike iji ma ọ bụ ime ihe ike. Ị nwere ike ịghọ onye na-anọchite anya ya maka nanị $ 3 kwa ọnwa.
Ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị dị iche iche. Ọ na-akwado Opera, Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox, na Google Chrome. E wezụga nke ahụ, ọ na-arụ ọrụ na gam akporo, Windows na IOS. Ị nwere ike nweta ya na Google Play.
Ọ na-echekwa foto na oghere kacha nta nke 150 pikselụ na nke kachasị dị elu nke 150 pikselụ. Dị ka ngwa niile, a na-emelite ya mgbe niile na njirimara ndị ọzọ.
Na nchịkọta, njirimara ndị na-eme "Chekwaa ihe oyiyi niile" ngwa ngwa karịa ọtụtụ nyocha weebụ bụ:
• Ọ dị mfe nghọta na iji;
• Ebe ọ bụ na ọ na-echekwa ihe oyiyi niile na ibe weebụ n'otu oge, ọ na-azọpụta ọtụtụ oge;
• Ọbụna ndị na-abụghị ndị na-eme ihe omume nwere ike iji ya ebe ọ bụ na ọ dịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla;
• Ịkwesighi ibudata ma wụnye ngwa ọ bụla;
• Ọ na-akwado ihe nchọgharị na ntanetị ọ bụla;
• Nke kachasị mkpa, ọ bụ kpam kpam ma e wezụga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ndị òtù gị.